ब्लग – ताजा समाचार
जनताको सेवामा खट्ने प्रहरीको होईन घर भित्र माक्स लगाइ बस्ने सांसद मन्त्रीको तलब काट्नु पर्छ । केही शब्द बढी लेख्दा फेरि हाम्रा हातमा हतकडी लगाइन कति बेर लाग्दैन फेरि सरकारको विरुद्ध बोले लेखे पत्रकार र नागरिकले भनि! तर मेरो देश कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि चालिएको लकडाउन र सामन्य दैनिकी गुजारा गर्न दिन भरी श्रम गर्ने […]
साइप्रसमा रहेका सरोज खड्का र कृप थापा भन्छन् यहाँको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ
अहिले विश्व कोरोना भाइरसबाट आतंकित भइरहेको छ। चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरू भएको यो भाइरस हाल चीनमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ भने इटाली अहिले यसको चरम चपेटामा छ। त्यस्तै युरोप, अमेरिका र मध्य पूर्वमा यो तीव्र दरले फैलने क्रममा जारीनै छ ।हाल विश्वभरी फैलिरहेका नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले “कोभिड १९” को नाम […]
पशुपतिनाथको कृपाले कोरोना विरुद्धको लडाई हामीले जित्ने छौं आशा गरौं
सुरज भुसाल – कोरोना भाइरसका कारण यतिबेला बिश्व आक्रान्त छ। बिज्ञान प्रविधि र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निकै फड्को मारेका देशहरु समेत संकट ग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन। गत डिसेम्बरमा चीनको वुहान बाट शुरु भएको सक्रमण अहिले विश्वका दुई सय भन्दा बढी देशहरुमा महामारीको रुपमा फैलिसकेको छ। मानव जिवनमा दिनानुदिन सन्त्रास एवम् डर पैदा भइरहेको छ। अहिलेसम्म विश्वका […]
१) अब अमेरिका महाशक्तिराष्ट्र रहेन । २) चीनले एउटै क्षेप्यास्त्र नचलाई तेश्रो विश्वयु$द्द जित्यो । अरू मुलुकले त आफूलाई अझै सम्हाल्न सकेका छैनन् । ३) रूसी राष्ट्रपती भ्लादिमिर पुटिन पो दूरद्रष्टा रहेछन । ४) उपचारले भन्दा रोकथामले ज्यादा जिन्दगी बचाउने रहेछ । ५) देशलाई फूटबल खेलाडी भन्दा स्वास्थ्यकर्मी पो चाहिने रहेछन । ६) युरोपियनहरू सोचेजस्तो […]
प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्रः कि केही थाहा नपाएर बाँच्न दिनुहोस्, कि भ्रष्टहरुको घाँटी निमोठ्नुस्
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू! यो बेला तपाईंलाई पत्र नलेख्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तै भो– लेख्नैपर्ने भयो। एकातिर तपाईं अस्वस्थ हुनुहुन्छ– मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि स्वास्थ्यलाभका लागि तपाईंले गर्नुपर्ने आराम खोसिएको छ। अर्कोतिर सारा विश्व नै कोरोनाभाइरस नामको डरलाग्दो जीवाणुको आतंकले हैरान छ। विश्व नै डगमगाएको बेला हाम्रो देश कसरी अछूतो हुन सक्थ्यो र? अहिले त्यहीँ कोरोनाको आतंकले सारा देश […]
केशब सापकाेटा आफुसँग भएको सवारी बेचेर अर्को लिने चक्करमा मैले असोज अन्तिम सातादेखि सार्वजनिक यातायात, बस ट्याक्सी, टेम्पो त कुनै बेला टुटल र पठाओका सेवा प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । १० वर्ष भएको थियो मोटरसाइकल चलाउन थालेको ब्याक बोनमा समस्या देखा पर्यो । ‘अब कि कम्प्लिट बेड रेस्ट कि बाइक रेस्ट’ सहारा फिजियोथेरापीका डा. राम […]
मन्त्री ढकालमाथि नेता महरको आ’क्रोशः जनताको करबाट तलबभत्ता पचाएर गै’रजिम्मेवार अभिव्यक्ती दिन ला’ज लाग्दैँन ?
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नैनसिंह महरले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई जिम्मेवार पदमा बसेर गै’रजिम्मेवार अभिव्यक्ती दिन लाज लाग्नुपर्ने बताएका छन् । जनतालाई विश्वभरी सन्त्रा’स फैलाईरहेको कोरोना भा’ईरसको सं’क्र’मण नेपालमा पनि देखिए सरकारले सबैलाई क्वारेन्टाईनमा राख्न नसक्ने अभिव्यक्ती स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले दिएपछि नेता महरले रोस प्रकट गरेका हुन् । स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू जिम्मेवार पदमा बसेर विश्वभर संन्त्रास फैल्याईरहेको कोरोना […]
डा. बिकाश न्यौपाने चिनको हुबेइ प्रान्त मा रहेका म लगायत अन्य नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सरकार ले उद्दार गरेर जब आफ्नै मातृभूमि नेपालमा आइपुग्यौं । हामी सबै १ सय ७५ जना नेपालीहरु लाई खरिपाटी मा राख्ने व्यवस्था भएको थियो र त्यस अनुरुप नै सबै लाई रामो व्यवस्था गरेर राखियो । आजको यस ब्लगमा मैले खरिपाटीमा १६ दिन […]
घाँटी दुखेर अस्पताल गएको म, कोरोनाको त्रासले बाथरूमै थुनिए…
चीनबाट सुरू भएको कोरोना भाइरसको त्रास विश्वभरि फैलिदैछ। चीनको वुहान प्रान्तबाट शुरू भएको कोरोना युरोपसम्म आइपुग्न धेरै समय लागेन। इटाली, फ्रान्स, बेलायतसम्म संक्रमण हुनेको सङ्ख्या बढ्दैछ। युरोपको सस्तो गन्तव्य मानिने इटाली र फ्रान्समा कोरोना भाइरसको बिरामी भेटिनु समग्र युरोपको लागि खतराको घण्टी हो। भर्खरै ‘कार्निभल’ को बिदा सकियो! कयौं पोर्चुगलका स्कुले विद्यार्थी छुट्टि मनाउन इटाली […]
यतिबेला समग्र विश्व नै कोरोना भाइरसको त्रासमा छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सबैतिरबाट प्रयास पनि भइरहेको छ। कोरोनाको सं’क्र’म’णबाट जोगिन सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ। तर, बजारमा अहिले मास्कको अभाव सिर्जना गरिएको छ। नेपालमा एक जनामा कोरोनाको सं’क्र’मण देखिएको र ती व्यक्ति पनि भाइरसमुक्त भइसकेका छन्। अन्य देशजस्तै नेपाल पनि भाइरसको उच्च जोखिममा […]
“प्रचण्डलाई थ प्पड ,जुत्ताचप्पल हा-न्ने मान्छेलाई जे लमा हैन लगेर घरमा राख प्रचण्ड, अनि उसलाई सोध, किन जुत्ता हा नियो?”-गंगा सुवेदी
✍ गंगा सुवेदी ‌ जस्तो कर्म उस्तै फल,तिरुवा लाई रि’हाइ गर कथित ज’नयु’द्धको नाम दिएर , हजारौं नि’र्दोषको र’गतमा हो’लि खेलेर, धेरैलाई अ’ङ्गभङ्ग बनाएर,सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्नो भकारी भोर्ने क. प्रचण्डलाई जुत्ता नहानेर के हान्ने ? ‌हिजो प्रचण्डको एक इसारामा आफ्नो जिन्दगी दा’उमा राखेर अरु कसैको जिन्दगी तहस नहस पार्न १ मिनेट सम्म नसोच्ने […]